प्याज को विभिन्न प्रकार को लागी उत्तम उपयोग - सुझावहरू र महान विचारहरू!
स्क्र्याचबाट सजिलो बेक ove्ग ओभन प्रेट्सेल रेसिपी
ईगल ब्रान्ड कुञ्जी लाइम पाई कुनै बेक छैन
सिब रेसिपीहरूमा क्रक पॉट मर्न
giardiniera को साथ इटालियन गोमांस स्यान्डविच नुस्खा
प्याज को विभिन्न प्रकार को लागी उत्तम उपयोग
तलका टिप्पणीहरूमा आफ्नै महान सल्लाहहरू थप्नुहोस्!
ओह, प्याज धेरै स्वादिष्ट छन्। तिनीहरू स्वादिष्ट, सस्तो र बहुमुखी छन्। तर, यदि तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन भने, तपाईंलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ कि विभिन्न प्रकारका प्याजहरू केको लागि उत्तम हो। यदि तपाईको टाउकोमा हरेक चोटि घुम्दछु जब तपाईं उत्पादन गलमा हिंड्नुहुन्छ, यस द्रुत गाईडले तपाईंलाई कुन प्याजहरू छनौट गर्ने बारे जान्न मद्दत गर्दछ जुन कुन भाँडाका लागि छन र कसरी ती सेवा दिइनु पर्छ।
१ रातो प्याज: सुन्दर छन् र कुनै पनि डिशमा रंगको एक टच थप्नुहोस्। तिनीहरू स्वादिष्ट कच्चा हुन्छन्। तपाईं तिनीहरूलाई सलाद, स्यान्डविच, ग्व्याकोमोल वा साल्सासमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू पनि धेरै स्वादिष्ट ग्रील्ड वा भुनी र त्यो राम्रो बैजनी / रातो रंग रहनेछ।
दुई पहेंलो प्याज: स्वादिष्ट हुन्छन् र शाब्दिक रूपमा कुनै पनि थाल वा नुस्खाका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले खानामा मीठो स्वाद थप्दछन् र स्वादिष्ट भुटेको र सारिएको छ! तिनीहरूलाई पास्ता सॉस, सूप, सॉस, स्टू वा भुनेको मासुमा थप्नुहोस्।
3 Scallions (हरियो प्याज पनि भनिन्छ): हल्का स्वाद छ र अक्सर कच्चा वा गार्निशको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू प्राय: एशियाली भाँडामा प्रयोग हुन्छन् र र colorको र टचमा कुनै चीजमा युनमेनेसको टच थप्दछन्।
चार Vidalia प्याज (उर्फ वाला वाला वा मीठो प्याज): धेरै मीठो र स्वादिष्ट कच्चा वा पकाएको छन्। तिनीहरू प्याजको घण्टीको रूपमा स्वादिष्ट हुन्छन् (थप उनीहरू राम्रा र बाक्लो हुन्छन् जसले तिनीहरूलाई एक आदर्श छनौट बनाउँदछ!) र उनीहरूले राम्रोसँग कारमेलिज गर्दछ स्वादिष्ट साउट्स र फ्रान्सेली प्याज सूप बनाउन।
।। शालोट्स: बोल्ड स्वाद छ र सॉस मा परिपूर्ण छन्। तपाईं प्राय: यी फ्रेन्च वा एशियाली खानामा फेला पार्नुहुनेछ। तिनीहरू बहुमुखी हुन् पनि sautéed र veggies वा gravies मा जोड्न सकिन्छ।
। लीक्स: सबै भन्दा राम्रो पकाएको सेवा छन्। तिनीहरू वास्तवमै कच्चा स्वादिष्ट हुँदैनन्। यो स्वाद र सूपको लागि प्रयोग गर्दा स्वादिष्ट हुन्छन् र स्टक र ब्रेजिising तरल पदार्थमा स्वादिष्ट स्वाद थप्दछन्। मलाई आंशिक रूपमा उनीहरूलाई स्टीम गर्न र त्यसपछि जैतूनको तेल र परमेसनको साथ टपिंग गर्न र तिनीहरूलाई भट्टीमा भुल्ने मन पर्छ!
यहाँ थप सल्लाहहरू
प्याज कसरी स्टोर गर्ने